Sajhasabal.com | HomeEDV-2019 को डिभी फारम रद्द, यसअघि डिभी भरेकाले अब के गर्ने ?
EDV-2019 को डिभी फारम रद्द, यसअघि डिभी भरेकाले अब के गर्ने ?
कात्तिक १, काठमाडौँ | प्राबिधिक कारण भन्दै EDV-2019 अन्तर्गत अक्टोबर १० सम्म भरिएका सबै फारमहरु रद्द गरिएको छ । यस सम्बन्धि सूचना https://dvlottery.state.gov/ मा गई हेर्न सक्नुहुनेछ ।
EDV 2019 को आधिकारिक वेबसाइट तथा बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले जनाए अनुसार अब इडीभी -२०१९ अन्तर्गत अक्टोबर ३ देखि १० तारिकसम्म भरिएका डाटा मान्य नहुने भएका हुन् । साथै समाचार अनुसार आज अर्थात Octover 18 देखि EDV फेरी खुल्ने भएको छ । आज सुरु भएर EDV 2019 को अब नोभेम्वर २२ सम्म भर्न सकिने भएको छ ।
अब भने EDV 2019 अन्तर्गत प्राबिधिक समस्या समेत समाधान भैसकेकोले ढुक्कले डिभी भर्न सकिने बताइएको छ ।
यस अघि डिभी भरेकाहरुले के गर्ने ?
नेपालका कन्सलटेन्सी, फोटो स्टुडीयो तथा साइबरहरुले सित्तिमै भर्न मिल्ने EDV चर्को शुल्क लिएर भर्ने गरेका छन्। यस अघि आफैले डिभी भर्नेहरुलाई खासै घाटा लागेन तर कन्सलटेन्सी, फोटो स्टुडीयो तथा साइबरबाट पैसा तिरेर डिभी भरेकाहरुले भने फेरी भर्दा दोहोरो खर्च तिर्नुपर्ने भएको छ । आज केहि कन्सलटेन्सी, फोटो स्टुडीयो तथा साइबरहरुले असोज २४ गतेदेखि साइट डाउन हुँदा समेत खुलेपछि इडिभी भर्ने भन्दै ठगि गरेका थिए ।
केहि साइबरहरुले यस अघि नै फोटो खिचाईसकेको आधारमा केहि सस्तोमा पनि डिभी भरिदिन सक्छन् एक पटक प्रयास पनि गर्न सक्नुहुनेछ । अन्यथा सित्तैमा भर्न मिल्ने डिभी भर्न फोटो खिच्ने बहानामा ३०० भन्दा बढी उठाउने गरेका कनसलटेन्सी, फोटो स्टुडियो तथा साइबरहरुलाई फेरी पैसा कमाउने अवसर मिलेको छ ।
अमेरिकी इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा (डिभी)को आवेदन फेरी खुलेको छ । EDV आफैले भरेमा डिभी चिट्ठा भर्नका लागि कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले चिट्ठा भर्नका निम्ति आवश्यक परेअनुसार परिवारका सदस्य, साथी वा जान्नेसँग सहयोग लिन आग्रह गर्दै कुनै पनि कन्सल्टेन्टको सहयोग नलिन आग्रह गरेको छ ।
आफै डिभी भर्न चाहनोहरुले तोकिएको समयभित्र www.dvlottery.state.gov वेवसाइटमा गएर डिभीका लागि आदेवन भर्न सक्नेछन् । निवेदनकले २१ वर्ष भन्दा कम उमेरका सबै सन्तानको स्पष्ट विवरण राख्नु पर्ने छ । एउटा मात्र आवेदन दिनुपर्ने छ । साथै अरुमार्फत फारम भर्दा पनि आफ्नै अगाडी सबै डाटा स्पष्ट हुनेगरि भरेको निश्चित भएर भर्नुपर्छ ।
अघिल्लो वर्षको डिभी आवेदनमा प्रयोग भएको फोटो यस वर्ष प्रयोग गर्न हुँदैन । अनलाइनमा उल्लेख भएको फोटो सम्बन्धी नियमलाई पूर्णत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । डिभी भर्नका लागि फोटो खिच्दा चस्मा समेत लगाउनु हुँदैन ।
डिभी भरेपछि आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर भने सुरक्षित राख्नुपर्छ । यही नम्बरका आधारमा पछी चिट्ठा पर्यो कि परेन भन्ने थाहा हुन्छ ।
प्रत्येक वर्ष खुल्ने डिभीमा नेपालीको आकर्षण उस्तै छ । समय समयमा डिभी चिट्ठा परेर अमेरिका पुगेका नेपालीको पीडादायी कथा पढेकाहरु समेत अमेरिका स्थायी बसोबास गर्न पाउने आशामा डिभी भर्ने गर्छन् ।